ပွဲသိမ်းခရာမှုတ်ပြီးမှ ဘာ့ကြောင့် မန်ယူအသင်းကို ပင်နယ်တီ ပေးခဲ့တာလဲ…? – MySport Myanmar
ပွဲသိမ်းခရာမှုတ်ပြီးမှ ဘာ့ကြောင့် မန်ယူအသင်းကို ပင်နယ်တီ ပေးခဲ့တာလဲ…?
ယနေ့ည အစောပိုင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ဘရိုက်တန် အသင်းနဲ့ မန်ယူအသင်းတို့ရဲ့ ပွဲစဉ်မှာတော့ အငြင်းပွား ဖွယ်ရာ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကိစ္စ ကတော့ ကွင်းလယ်ဒိုင် ဟာ ပွဲသိမ်းခရာကို မှုတ်ပြီးမှ မန်ယူအသင်းအား ပင်နယ်တီ ကန်ခွင့် ပေးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါပဲ။ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘောလုံးပရိသတ် အများစုက ကွင်းလယ်ဒိုင်ကို အထင်အမြင် လွဲမှားခဲ့ပေမယ့် ကွင်းလယ်ဒိုင်ရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကဲ ဒါဆို ပင်နယ်တီ ပေးခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်ဒိုင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ဘာ့ကြောင့် မှန်ကန်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို အောက်မှာ ဆက်ပြီး ဖော်ပြသွားပါမယ်။
မန်ယူအသင်းရဲ့ ပင်နယ်တီဟာ ပွဲသိမ်းခရာ မှုတ်ပြီးမှ ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ ပင်နယ်တီ ဖြစ်ပြီး ဒီပင်နယ်တီဟာ ဘရိုက်တန် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး မော်ပေးရဲ့ သိသာ ထင်ရှားတဲ့ လက်ထိဘော ကနေ ရရှိခဲ့တဲ့ ပင်နယ်တီပါ။ ပွဲသိမ်းခရာ မှုတ်ပြီးမှ ပေးခဲ့တဲ့ ပင်နယ်တီ ဖြစ်ပေမယ့် IFAB ( International Football Association Board ) ကတော့ ကွင်းလယ်ဒိုင်ရဲ့ ပင်နယ်တီ ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်မှုဟာ မှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ ဘာ့ကြောင့် ကွင်းလယ်ဒိုင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မှန်ကန်ခဲ့လဲ ဆိုတာ ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ပြန် သွားခဲ့ပါတယ်။
IFAB ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဘောလုံးပွဲ တစ်ပွဲထဲမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်တွေကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်ရာမှာ အချိန်အကန့်အသတ် မရှိပဲ ပွဲသိမ်းခရာ မှုတ်ပြီးသည့် တိုင်အောင် အကျူံးဝင်တယ် လို့ သိရပါတယ်။ IFAB ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် မှာတော့ ” ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ပြန်လည် စစ်ဆေး သုံးသပ်ရာမှာ အချိန် ကန့်သတ်ချက် မရှိပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ပွဲအရှိန်ထက် တိကျဖို့က ပိုပြီး အရေးကြီးလို့ပါ။ တကယ်လို့ ကွင်းလယ်ဒိုင်နဲ့ အခြား ပွဲရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ က ဖြစ်ရပ် တစ်စုံတစ်ရာကို မလွဲချော်ခဲ့ရင် သူတို့ဟာ ကနဦး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ လွဲချော်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေသာ ရှိရင် အဲ့ဒါကို ပြန်ပြီး စစ်ဆေးရမှာပါ ”
” ပြန်လည် စစ်ဆေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန် ပြီးဆုံးအောင် လုပ်ရမယ် ဆိုပေမယ့် ပွဲအရှိန်ထက် တိကျမှုက ပိုပြီး အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ တချို့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို ပြန်ပြီး စစ်ဆေးတဲ့ နေရာမှာ အချိန် ကန့်သတ်ချက် မရှိတာပါပဲ။ Laws of the Game အရ ကွင်းလယ်ဒိုင်ဟာ ဖြစ်ရပ်မတိုင်မီ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အားလုံးကို ပြန်လည် ဖျက်သိမ်းပြီး ပွဲကို ပြန်လည် စတင် ကစားစေနိုင်ပါတယ် ” ဆိုပြီး ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် မန်ယူအသင်းဘက်ကို ပင်နယ်တီ ပေးခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်ဒိုင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မမှားယွင်းခဲ့ဘူး လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့ အရှေ့မှာ အလားတူ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးတယ် လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ် ကတော့ ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ကာ အဆိုပါ ပွဲစဉ်မှာ ပထမပိုင်း ပြီးဆုံးသွားပြီး ကစားသမားတွေ အားလုံး အဝတ်လဲခန်းထဲ ရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ကွင်းလယ်ဒိုင်ဟာ VAR ကို ပြန်ကြည့်ကာ ကစားသမားတွေကို ကွင်းထဲ ပြန်ဝင်စေပြီး ပင်နယ်တီ ကန်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘရိုက်တန် အသင်းနဲ့ မန်ယူအသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်ကို ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်ဒိုင် ကာဗန်နက်ဟာ မှန်ကန်သင့်လျော်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ကို ချမှတ်သွားနိုင်တယ် လို့ ဆိုရမှာပါ။
MySport Myanmar2020-09-26T21:52:30+06:30September 26th, 2020|Football, Premier League|